Somali News | SAHAN ONLINE - Part 3
Muudey: Guddoomiye Mursal Xanaaq ayuu ku qabtay mooshinka[Dhageyso]
MUQDISHO - Guddoomiye Kuxigeenka 1aad ee Golaha shacabka Cabdiweli Ibraahim Muudey ayaa sheegay in loo baahan yahay in la qadariyo nidaamka iyo shuruucda dalka u degsan. Muudey ayaa sheegay in uu … [Read more...]
Duqa Boosaaso oo Kormeeray Mashaariicda ay ka wadaan degmada Boosaaso[Sawirro]
BOOSAASO - Duqa degmada Boosaaso Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan ayaa maanta kormeeray qeybo kamid ah mashaariicda ka socota magaalada Boosaaso. Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan iyo xubno kamid ah … [Read more...]
Xildhibaanada Mooshinka ka keenay Madaxweyne Farmaajo oo hadlay[Dhageyso]
MUQDISHO - Xildhibaano gaaraya 92 mudane oo kamid ah Xildhibaanada Gollaha Shacabka ayaa maanta mooshin ka gudbiyay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Xildhibaanada gudbiyay … [Read more...]
GAROOWE-Musharaxa madaxweynaha Puntland Mudane Asad Cismaan Cabdullaahi oo socdaalka uu ugu magac daray Difaac iyo dowladnimo ku maraya goboladda Puntland ayaa maanta si ballaaran loogu soo … [Read more...]
Guddoomiyaha Gollaha Shacabka oo qabtay Mooshin xilka looga qaadayo Madaxweyne Farmaajo
MUQDISHO - Guddoomiyaha Gollaha Shacabka Maxmed Mursal ayaa goor dhaweyd qabtay mooshin ka dhan ah Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sida la sheegay mooshinkan ayaa ah hindise … [Read more...]